Faransiiska : Wiil Dhalinyaro ah oo Qoorta ka Jaray nin Macalin ah oo ku Gefay Nebi Maxamed NNKH | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Faransiiska : Wiil Dhalinyaro ah oo Qoorta ka Jaray nin Macalin ah oo ku Gefay Nebi Maxamed NNKH
Oct 17, 2020 - 1 Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Nin la sheegay in uu ahaa Macalin ayaa dhintay kadib markii madaxa looga jaray banaanka magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska. Dacwad oogayaasha howlgalka la dagaalanka argagixisada ee Faransiiska ayaa kiiskan baaraya. Ninka lagu tuhunsan yahay inuu falka gaystay oo ahaa nin 18 jir ayay boolisku toogteen. Habeenkii Sabtida, ayaa boolisku qabteen ilaa afar qof oo kiiskan lala xiriirinaayo.
Allahu Akbar ilaahay Ayaa shahaado meel dhow ka siiyay isagoo nabimuxamed difaacayaa ayuu aduunka dhaafaya
Uduceeya oo u farxa inankaa aduunku waa dharaaro meesha aan lags dhimsnayn gaboobay waa janno ninka ilaahay la doono kuwan muslimsk isku dhex qarxiyaa balaayo ayay doonteen laakiin jahaadka saxds Ah waa kan